Rotterdam dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra tany Eoropa hita ety ivelany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Ianao mitaingina ny adiny efatra eo ho eo, ary dia hanana fiovam-fiaran-dalamby in Brussels. Tsy tokony handany ny £ 185 amin'ny miverina tapakila. Efa ela Rotterdam nanao laza ratsy karazana noho ny gritty amin'ny seranan-tsambo na inona na inona fa ny fanentanana an-tsary sy ny fandefasana fitoeran. Vao haingana, dia nanintsana ny laza sy ny mpizaha tany mba mahazo mahita izany ao amin'ny fahazavana vaovao tanteraka. Tamin'ity indray mitoraka ity around, ianao tia ny tanàna noho ny kanto sarobidy, the Museum Boijmans Van Beuningen which “which runs the gamut from Brueghel the Elder to Salvador Dali.” Misy be dia be ny mahita sy traikefa eto, ary ny zava-misy izay Rotterdam no hita ety ivelany ny rail fotsiny miampy iray hafa.
Ankoatry ny, teny an-dalana any no hahitanareo ny malaza tulip saha, izany no antoka mankanesa any an-tanàna lehibe Vibe.
Ny fomba haingana hahazoana ny Antwerp dia amin'ny alalan'ny adiny efatra eo ho eo nandeha lamasinina sy miova fiaran-dalamby in Brussels. Tsy mandoa ny £ 87 ny olona hiverina tapakila izay mampino. Na dia eo aza ny toerana hafahafa (ny tanàna eo amin'ny sisin-tanin'i Belzika sy Holandy), Antwerp dia, hafahafa ampy, faran'izay azo idirana lamasinina. Azonao atao mihitsy aza mividy ny "Ny Belza Station" tapakila amin'ny alalan'ny Eurostar ary hahazo na aiza na aiza eto amin'ny firenena, Antwerp hita - miaraka amin'izay koa vidin'ny toy ny mitaingina ho Brussels. Antwerp dia ho tena mahaliana rehetra tia ny diamondra: Antwerp, Belzika prides ao amin'ny Diamond District, izay mirehareha ho ny tanàna izay ny sasany amin'ireo miavaka indrindra fanapahana, Nikosokosoka, dia manaova varotra diamondra / vatosoa hatao.
Mifandraisa Save A Train au livre ny lamasinina nankany amin'ny toerana tany Eoropa hita ety ivelany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, ary dia hanamaivana anareo na lafo saram famandrihana, fomba sarotra famandrihana, ary azo atao taha. Nahazo anao izahay nandrakotra dingana rehetra tamin'ny lalana. ary, indray mandeha ny zava-drehetra ny nandamina – Ataovy azo antoka tianao ny fiaran-dalamby sy ny mitaingina toerana halehany, haka be dia be ny sary ary aoka isika hahafantatra ny fomba nandeha ny zava-drehetra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-underrated-places-in-europe-reachable-by-train%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)